Haweeney Soomaali Lagu Jidh-Dilay Xabsi Ku Yaalla New Zealand Oo Magdhow La Siiyey – somalilandtoday.com
Haweeney Soomaali Lagu Jidh-Dilay Xabsi Ku Yaalla New Zealand Oo Magdhow La Siiyey
(SLT-Haweeney Soomaali ah oo lagu magacaabo Asha Ali Abdulle ayaa la siiyey qeyb ka mid ah lacago magdhow oo loo qoondeeyey, kadib markii lagu jir-dilay Xabsiga.
Haweeneydaasi waxay soo dhammaysatay xabsi 9 sanno ah oo ay ku muteysatay Afduub ay u geysatay Diyaarad nooca yar oo 19-ka kursi leh bishii Feberaayo 8-dii ee sannadkii 2008-dii, waxaana xabsiga laga sii daayey bishii Feberaayo ee sannadkii 2017-kii.
Diyaaradaasi waxaa lahayd Shirkadda diyaaradaha ee Eagle Flight, waxayna xilligii la afduubanayey isaga kala gooshaysay magaallooyinka Blenheim iyo Christchurch ee dalkaasi.
Maxkamad ku taalla magaalada Christchurch waxay Isniintii la soo dhaafay ku dhawaaqday in Haweeneydaasi magdhow laga siiyey dhibaatadii jidh-dilka ee loogu geystay Xabsiga muddadii ay xidhnayd.
Waxay dhaawacyo ka soo gaadheen gacmaha, mana awoodo inay shaqsi ahaan soo xaajo-gudato Suuliga ama ay Shaawarka ku soo qubeysato.
Haweeneydaasi oo ay Dhakhaatiirta hore u sheegeen inay qabto dhibaato maskixiyan ayaa waxaa la sheegay in laga yaabo in la siiyey illaa 15,500 dollar oo ka mid ah Kharajka guud ee magdhowgii loo xukmiyey oo dhamaa 25,000 oo dollar.
Shabakadda Wararka ee stuff.co.nz ee ka soo baxa dalka NZ ayaa qoray in hal Duuliye iyo saddex qof oo rakaab oo ka mid ahaa Dhibanayaashii diyaaradda la afduubtay sheegteen magdhow.
Duuliyaha oo mindi looga dhaawacay suulkiisa ayaa dalbaday magdhow dhan 146,341 Dollar, balse waxaa magdhow loo siiyey 5,000 oo Dollar, halka saddex qof ee rakaabka ee Dhibanaha ahaa la siiyey min 1,500 oo Dollar.
Dhinaca kale, Maxkamad waxay go’aamisay in Asha Ali Abdulle la siiyo 15,500 oo dollar oo ah Lacagtii ka soo hadhay kharajkii guud ee la kala siiyey Duuliyaha iyo Dhibanayaasha kale.
Asha Ali Abdulle oo dalka NZ tegtay sannadkii 1994-kii, waxay ku noolayd, kana shaqeysan jirtay magaalladda Blenheim, waxaana la sheegay inay ahayd qof ka xanuunsan dhimirka.